Tag: spam fikarohana | Martech Zone
Tag: spam fikarohana
Inona no atao hoe Search Engine Spam?
Talata, Aogositra 14, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Nandeha daka be izahay tato ho ato ary nampitandrina anao momba ny teknikan'ny motera fikarohana izay hahatonga anao hanana olana. Na dia tsy mijaly aza ny tranokalanao anio, Google manohy manitsy ireo algorithma nataony ary mizaha toetra vaovao hahatratra anao rahampitso. Aza alaim-panahy hikorisa amin'ny motera fikarohana… hahatratra anao izany. Ity Search Infographic nosoratan'i SEO Book ity dia mitondra anao amin'ireo teknika samihafa tokony hialanao
Voaroaka: MyBlogLog sy BlogCatalog Widgets
Alakamisy 27 martsa 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ho anao izay efa mpamaky hatry ny ela dia ho hitanao fa nesoriko ireo widgets sidebar MyBlogLog sy BlogCatalog. Niady mafy tamin'ny fanesorana azy ireo nandritra ny fotoana elaela aho. Tiako ny nahita ny endrik'ireo olona nitsidika ny bilaogiko matetika - nahatonga ny mpamaky ho toy ny olona tena izy fa tsy statut amin'ny Google Analytics. Nanao fanadihadiana feno momba ny loharano tsirairay aho sy ny fomba nitondrany ny fifamoivoizana nankany amin'ny tranokalako ary koa